Kitra : tafita amin’ny famaranana ny Barea de Madagascar | NewsMada
Kitra : tafita amin’ny famaranana ny Barea de Madagascar
Hiatrika ny famaranana, amin’ny lalao baolina kitra, hiadiana ny medaly volamena, amin’ny CJSOI, ny Barea de Madagascar, vehivavy. Resiny, teo amin’ny ankatoky ny famaranana, tamin’ny isa 2 noho 0, omaly, ny Club M avy any Maorisy. Fihaonana notontosaina tetsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina.
Baolina tafiditr’i Ando, teo amin’ny minitra faha-40 sy ny an’i Tsinjo, minitra faha-45, no nahatafita ny Barea de Madagascar. Niady ny lalao satria niezaka nanohitra an-dry Tombo sy ny namany ry zareo Maorisianina. Tsy nanao fanafihana mihitsy ny Club M fa niaro tena fotsiny ary nionona tamin’ny valim-panafihana fotsiny, izay tsy natahorana mihitsy.
I La Réunion no hifandona amin’ny Barea de Madagascar, eo amin’ny famaranana, rahampitso zoma. Ry zareo Reonioney, izay nandavo an’i Mayotte, tamin’ny isa mavesatra 5 noho 0. Tsy niady mihitsy ny fihaonana satria nanantombo teo amin’ny lafiny rehetra ny tovovavin’i La Réunion.
Marihina fa ekipa samy tsy mbola resy mihitsy, nanomboka hatrany amin’ny fifanintsanana ka hatreto amin’ny famaranana, ny Barea de Madagascar sy La Réunion. Raha tsiahivina, voalohany tao amin’ny sokajy “A” ry zareo Reonioney ary lohany tao amin’ny vondrona “B” kosa ny Malagasy.